Thwebula G Data Internet Security 25.5.6.20 – Vessoft
WindowsUkuphephaUkuvikelwa okupheleleG Data Internet Security
Ikhasi elisemthethweni: G Data Internet Security
I-Wikipedia: G Data Internet Security
G Data Internet Security – ukuvikelwa okunokwethenjelwa kwikhompyutha yakho ngokumelene namagciwane, i-malware, nezinsongo ze-intanethi. Isofthiwe inikeza ukuvikelwa ekusongweni okungaziwa ngenxa yokuqapha nokuziphatha kwamafayela wefu. I-G Data Internet Security ivimbela izigebengu ekubhapheni amafayela womsebenzisi besebenzisa ukukhubazeka kokuphepha kwisofthiwe efakiwe. I-firewall eyakhelwe ngaphakathi ivimbela ngempumelelo ukuhlaselwa kwewebhu kanye nemizamo yokuskena kwe-port futhi ithola izimpawu zokusetshenziswa kabi kwenethiwekhi ngezinhlelo zokusebenza ezingaziwa. I-G Data Internet Security iqinisekisa ukuvikeleka okungcono ngesikhathi kusetshenzwa kwewebhu kanye nokuthengwa kwe-inthanethi ngokumelene namawebhusayithi okuphanga, ama-keyloggers, kanye nabaphathi bemininingwane eyimfihlo. Isofthiwe ihlola i-imeyli yezinamathiselo ezinonya futhi isihlungi esakhelwe ngaphakathi sivikela umsebenzisi ngokumelene nokukhangisa, ukuphinga, kanye neminye imilayezo egaxekile engadingekile. I-G Data Internet Security isekela ukulawula kwabazali ukuvimbela izingane ngokuqukethwe okungafuneki ku-intanethi, ukugcinwa kwemininingwane encrypted kwisitoreji sefu, ukususa amafayela ngaphesheya kokuthola futhi ukulawula izinhlelo zokusebenza ukuqala.
I-antivirus, i-antispam, i-anti-ransomware
Ukuqapha ukuxhumana okungenayo nokuphumayo
Ukuqapha ifayela lokuziphatha
Ayithinti ukusebenza kwesistimu
Thwebula G Data Internet Security
G Idatha Yokuphepha Okugcwele – Isoftware yokulwa nama-antivirus enobuchwepheshe obusezingeni eliphezulu bokuphepha kanye nesethi yamathuluzi angeziwe wokuvikela ngokumelene namagciwane nokusongelwa kwenethiwekhi.
Amazwana ku G Data Internet Security
G Data Internet Security software ehlobene
Lena isofthiwe yonke indawo yokuvikela ikhompyutha yakho futhi ithuthukise ukusebenza kwayo ngokulungisa izinkinga ohlelweni.
I-ESET Security Security – i-antivirus ebanzi enobuchwepheshe befu yokuvikela ekuhlaselweni kwenethiwekhi, i-hlengware, nenye i-software enonya.
Isiphequluli ukusebenza nge isethi amamojula ezahlukene for the ukuhlala elula in the internet. Isofthiwe inikeza Ukuvinjwa emafasiteleni pop futhi ikhubaza okulandwayo kwezithombe.
Noma iyiphi i-Video Converter – ithuluzi elisebenzayo lokuguqula amafayili okusheshayo nangokufanele. Isoftware isekela amafomethi athandwayo futhi iqukethe amaphrofayli atholakalayo ukuguqula amafayela.
I-HipChat – isoftware yakhelwe ukuhlela izinqubo ezisebenzayo nokwakha indawo yokusebenza eyodwa ukuthuthukisa ukusebenzisana phakathi kwabasebenzi.